घुमघाम गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ ? हेर्नुहोस् तपाईका लागि उपयुक्त हुनसक्ने ७ गन्तव्य - Arthatantra.com
घुमघाम गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ ? हेर्नुहोस् तपाईका लागि उपयुक्त हुनसक्ने ७ गन्तव्य
अंग्रेजी महिनाको डिसेम्बरको आधाआधी गएसँगै क्रिशमश र अंग्रेजी नयाँ वर्षका लागि विभिन्न योजनाहरु बुन्ने क्रम चल्न सुरु भइसकेको छ । बिस्तारै कलेज स्कुलहरुले पनि केही दिन या केही महिनाको जाडो बिदा दिने बेला पनि आइसकेको छ । कामकाजी व्यक्तित्वहरुलाई व्यस्त दैनिकीबाट केही छिन वा केही दिनको फुर्सद निकाल्ने उपयुक्त बहाना पनि मिल्ने अवस्था छ । यस्तोमा के तपाई पनि आफन्त वा साथीभाइसँग घुमघाम गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ ? यदि हुनुहुन्छ भने हामीले तपाईका लागि उपयुक्त हुनसक्ने ७ गन्तव्य ल्याएका छौं । यसपटकको एक दिने छुट्टी या केही दिने छुट्टीको सदुपयोग आन्तरिक पर्यटक भएर गर्ने कि त ? हेर्नुहोस् ७ गन्तव्य :
काठमाडौं नजीकको प्रसिद्ध रमणीय स्थल हो । यो स्थान काठमाडौंबाट ३२ किलोमिटर उत्तर-पूर्वमा रहेको छ । नगरकोटबाट मौसम सफा भएको बेला उत्तरमा मनमोहक हिमालयका चुचुराहरूका साथै विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको रोमाञ्चक दृश्य देख्न सकिन्छ। यहाँवाट देखिने अन्य हिमाल चुचुराहरूमा धौलागिरि हिमश्रृंखलादेखि कञ्चनजंघा हिमश्रृंखलासम्मको मनांस्लु, गणेश हिमाल, लामटाङ्ग हिमाल, गौरी शंखर, चावु, ल्होत्से, मकालु नेम्वुल इत्यादि छन् । नगरकोट क्षेत्र हिमालको काखबाट निस्कने सूर्योदयको दृष्यावलोकन लागि पनि प्रसिद्ध छ ।
ककनी नुवाकोट जिल्लामा पर्ने एक गाउँ विकास समिति हो। नुवाकोट जिल्लामा पर्ने पर्यटकीय क्षेत्र ककनी काठमाडौंबाट २० किलोमिटर दूरीमा छ । यो स्थान समुद्री सतहबाट २२०० मिटरको उचाइमा छ । यो ठाउँ स्टेबरीको पनि लागि प्रसिद्ध छ । त्यसैगरी ट्राउट माछा खान मन पराउनेहरुको लागि पनि यो उपयुक्त गन्तव्य हुन सक्छ । काठमाण्डौंबाट एक रात बस्ने वा उही दिन गएर आउनका लागि यो एउटा राम्रो घुमघाम गर्ने स्थान हो ।
काठमाडौंबाट थानकोट, नौबिसे हुँदै पृथ्वी राजमार्गबाट ७५ किलोमिटर दूरी पार गरेर तीन घण्टामै दामन पुग्न सकिन्छ । चन्द्रागिरी हुँदै चित्लाङको कच्ची बाटोबाट जाने हो भने अझ छिटो पुगिन्छ । यस्तै दक्षिणकालीबाट फाखेल हुँदै कुलेखानीको मार्खुबाट टिस्टुङ निस्केर अर्को वैकल्पिक बाटो छ । हेटौंडाबाट ३३ किलोमिटर पार गरेपछि दामन पुगिन्छ । दामनबाट अन्नपूर्ण, मनास्लु, गणेश, लाङटाङ, दोर्जे लाक्पा, गौरीशंकर लगायत हिमाल हेर्न सकिन्छ । हिउँदमा हिउँ परेर दामन सेताम्मे हुन्छ ।
गोरखामा रहेको मनकामना मन्दिरको दर्शन हिन्दु धर्मालम्बीहरुको लागि तीर्थस्थल जस्तै हो। चितवनको कुरिनटारबाट केबलकार चढेर जाने यो मन्दिरबाट मनास्लु हिमचुली तथा अन्नपुर्ण हिमश्रृखलाको सुन्दर दृष्यावलोकन पनि गर्न सकिन्छ। यदी तयाई पैदल यात्रा गर्न रुचाउनुहुन्छ, भने पृथ्वीराजमार्गको आँबुखैरेनीबा मस्र्याङदी नदीको सानो पुल तरेर करिब ४ घण्टाको उकालो पैदरयात्रा गरेपछि तपाई मनकामना मन्दिर पुग्न सक्नुहुन्छ । काठमाण्डौंबाट एक रात बस्ने वा उही दिन गएर आउनका लागि उपयुक्त गन्तव्य हो।
नेपालको तेस्रो पर्यटकीय गन्तव्य चितवनको सौराहा वाइल्डलाइफ टुरिजमका लागि प्रशिद्ध रहेको छ । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज रहेको यस क्षेत्रको मुख्य आकर्षणमा हात्ती चढेर जंगल सफारी, राप्ती नदिमा डुङ्गा सयर, सूर्यास्त र थारु कल्चर हुन् । आन्तरीक तथा बाहिय पर्यटकहरुको लागि महत्वपूर्ण गन्तव्य सौराहा चितवन भरतपुरदेखि करिव १८ किलोमिटर पूर्व–दक्षिण अवस्थित छ ।
एउटा ऐतिहासिक सहर जसको आफैमा महत्व त छँदैछ। कुनै समयको ब्यापारीक केन्द्र रहेको र पछि विविध कारणले किनारा लागेको जिउँदो इतिहास पनि हो बन्दिपुर। बन्दिपुको बारेमा वर्णन गरिने विभिन्न मिथकहरु आफ्नो ठाउँमा छन् तर हिउँदको समयमा खुलेको अन्नपुर्ण र धौलागिरी हिमश्रृखलाको अवलोकनका लागि उपयुक्त गन्तव्य हुनसक्छ। काठमाडौं, पोखराबाट धेरै टाढा पनि नभएको यो गन्तव्य एकदिने यात्राका लागि उपयुक्त घुमफिर गन्तव्य पनि हो।
पोखरा भन्ने वित्तिकै पर्यटकको पहिलो रोजाईमा पर्ने स्थान हो। यो क्षेत्रमा पुगेपछि आँखै अगाडि हिमाल हेर्न मात्र नभएर तालमा बोटीङ गर्न सकिन्छ। यहाँ गुफा हेर्न चाहनेले गुफा तथा साहसीक खेल रुचाउनेले प्याराग्लाईडीङ, अल्टा, बन्जी, जिप फलाएर जस्ता साहसीक खेलहरुको आनन्द लिन सक्छन्। यसका साथै धर्म प्रती रुची राख्ने पर्यटकहरुको विभीन्न धार्मिक महत्वका मन्दिरहरू बिन्ध्यबासीनी, बाराही मन्दिरसमेत रहेको छ।
२७ मंसिर २०७३, २।००
दशैं कहिलेदेखि शुरु भयो, किराँतकालिन सभ्यता के थियो ? मुस्ताङमा ४ हजार वर्ष पहिलेका धानका दानाहरु फेला परे नेपालमा खेतीपातीको कुरा गर्दै […]
बुद्धका १० उपदेश जसले तपाई-हाम्रो जीवनप्रतिको दृष्टिकोण बदलिदिन सक्छ शाक्यमुनी बुद्ध (सिद्धार्थ गौतम), जो बुद्धका रुपमा चिनिन्छन्, उनी एक अन्तरज्ञानी थिए र […]
सेयर बजारमा उतार चढाव हुँदा दिक्क हुनुहुन्छ ? यसरी पत्ता लगाउनुहोस् मौका सेयर बजारको प्रवृत्ति नै माथि तल गरिरहने भएकाले पनि यहाँ बारम्बार खरिद बिक्रीका अवसर […]
सेयर कारोबार सहज बनाउन ल्याइएको आस्बा प्रणाली (के हो ?) बिस्तृत जान्नुस ! लामो लाइन, घाम, पानी अनि फारम नपाइने समस्याबाट पीडित सेयरको आवेदन दिने लगानीकर्ताले अब […]
सुकरातको जीवनमा घटेको एउटा उत्प्रेरक कथा : सफलताको रहस्य एकपटक एक युवकलाई सफलताको रहस्य जान्ने इच्छा भयो । उसलाई थाहा थियो यो विषयमा उसलाई सुकरात […]
पर्यटन बोर्डले बजेट बनाउँदा सरोकारवाला खोजेन ! नेपाल पर्यटन बोर्डले भर्खरै सार्बजनिक गरेको बजेट ०७२ र ०७३ राम्रोसँग अध्ययन गरें । […]